Indlu yamaplanga emangalisayo enembonakalo yolwandle, ibhafu enamanzi ashushu nokunye. - I-Airbnb
Indlu yamaplanga emangalisayo enembonakalo yolwandle, ibhafu enamanzi ashushu nokunye.
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMariana
Yakhiwe phezu kweepleyiti, le ndlu yamaplanga isandul 'ukulungiswa inembonakalo entle yolwandle. Inamagumbi okulala amathathu negumbi lokuhlambela elinye, le ndlu inayo nantoni na oyifunayo ukuze wonwabele uhambo lwakho. Phantse indawo yokupaka engenamida, izibane ze-hue, iiTV ezine-Chromecast, ibhafu enamanzi ashushu, i-TV yesatellite, i-Wifi yasimahla kwaye ikufuphi nolwandle.
Ukususela ehlotyeni ngo-2018, le ndlu ikhutshiwe ngokupheleleyo kwi-intanethi. Ngoku, onke amandla aveliswa ngeepaneli ze-solar kwaye agcinwe kwiibhetri. Siyazidla ngale nto.
Siyazamkela izilwanyana zasekhaya.
Yakhiwe phezu kweepleyiti, le ndlu yamaplanga isandul 'ukulungiswa inembonakalo entle yolwandle. Inamagumbi okulala amathathu negumbi lokuhlambela elinye, le ndlu inayo nantoni na oyifunayo ukuze wonwabele uhambo lwakho. Phantse indawo yokupaka engenamida, izibane ze-hue, iiTV ezine-Chromecast, i-HotTube, i-TV ye-satellite, i-Wifi yasimahla kwaye ikufuphi nolwandle.
4.63 · Izimvo eziyi-167
Indlu yamaplanga ibekwe phakathi kwendalo. Ungabona iinkomo namahashe kwindawo ephakamileyo eyi-500m ukusuka endlwini, uze uhambe imizuzu eyi-5 ukuya elunxwemeni ukuze wenze i-kite surfing. Ekuseni uza kuvuswa ngesandi nje seentaka. Isecaleni kwezinye izindlu o. Umva wendlu. Yonke enye into yindalo nje.
Iindwendwe azizukudinga ukunxibelelana nathi. Siza kusoloko siphendula iimpendulo zakho nge-mindasaging